गाईघाट। अहिले धेरै नेपाली युवा विदेशमा पैसा कमाउन गए पनि सोचेजस्तो पैसा कमाइ नभएपछि धेरै दुःख पाएर विदेशको अनुभवले स्वदेशमा नै धन कमाउन विभिन्न पेशा गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तै..
माघे संक्रान्तिको व्यापार सातामै १३ करोडको तरुल कारोबार
काठमाडौं । माघे संक्रान्ति नजिकिँदै जाँदा तरुलको व्यापार उच्च भएको छ। एक साताको अवधिमा उपत्यकामा मात्र करिब १३ करोड मूल्यबराबरको तरुलको व्यापार भएको छ। नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका..
धनगढी । असन्तुलितरुपमा डिएपी र युरियाजस्ता रासायनिक मलको प्रयोगले उर्बर माटो बिग्रिन थालेको भन्दै कैलाली जिल्लाका किसानले यसको विकल्पमा सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनियम सल्फेट मलको खोजी गर्न थालेका छन्..
लमजुङको मस्र्याङ्दीमा कृषि र पशु विकासतर्फ ९१ लाख बजेट
लमजुङ । लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा कृषि र पशुविकासतर्फ ९१ लाख बजेट छुट्टाइएको छ । स्थानीय तहमा कृषि र पशुसम्बन्धी बजेट हराइरहेका बेला मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले कृषि र पशु विकासतर्फका योजनालाई प्राथामिकता..
१७ करोड रुपैयाँको सुन्तला फल्यो
बागलुङ । बागलुङका कृषकले यस सिजन १७ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपियाँ बराबरको सुन्तला फलाएका छन्। अनुकुल मौसम तथा क्षेत्रफल विस्तार हुँदा यस वर्ष सुन्तला उत्पादन बढेपछि बागलुङको सुन्तला..
बाँके । श्रीमानसँग पाँच रुपैयाँ मागेर शहकारीमा बचत गर्न सुरु गरेका राप्ती–सोनारी गाउँपालिका–७, फत्तेपुरका महिला अहिले वार्षिक एक लाखदेखि डेढलाख रुपैयाँ कमाउन थालेका छन् । व्यवसायिकरुपमा बाख्रा पालन गर्न थालेपछि..
बार्षिक चार अर्ब ३५ करोडको तरकारी बिक्री
धनकुटा । बाह्रै महिना तरकारी उत्पादन हुने धनकुटामा रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको तरकारी बिक्री भएको छ । सिँचाइको सुविधा भएका क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेको सङ्ख्या बढेसँगै तरकारी उत्पादन..
कृषि व्यवसायमा अनुदानको ओइरो, कुन क्षेत्रमा कति पाइन्छ ?
काठमाडौं । करिब सात अर्ब अनुदानमा : कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कुल बजेट २४ अर्ब २६ करोड हो । यसमध्ये करिब सात अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा विनियोजन..
कवाडीमा करोडौको कारोबार हुन्छ तर सबै भारत पुग्छ
मोरङ । पैसा कमाउने सुन्दर सपना बोकेर दैनिक करिब एक हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गइरहेका छन् । देशमा रोजगारको सम्भावना नदेखेर नेपाली युवा खाडीतर्फ हानिइरहेका बेला भारतीय नागरिक भने..
मदिरा उत्पादन छाडेर व्यावसायिक पशुपालनमा, सहकारीले दियो बिनाधितो ऋण, फेरिए कृषकका दिन
सुशीला रेग्मी पाल्पा । रिब्दिकोट गाउँपालिका–६ ठिमुरे इजरडाँडाका बासिन्दा मदिरा उत्पादन छाडेर व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन्। उनिहरुले पहिला वर्षौंदेखि दैनिक ठूलो परिमाणमा मदिरा उत्पादन गरेरै परिवार पाल्ने गरेका थिए। मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन..
हिमालपारीको आलु काठमाडौँ आउन थाल्यो
मनाङ । बजारको अभावमा कुहिएर फाल्नु पर्ने मनाङको आलु अहिले काठमाडौँ भित्रिन थालेको छ। मोटरबाटो नहुँदा यहाँ उत्पादन भएको स्वादिलो आलु जिल्ला बाहिर जान सकेको थिएन। जब मोटर बाटो आयो, सानै..
पाल्पा । पाल्पा दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ । जिल्लामा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादन प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत पाँच वर्षयता दूध र मासुमा आत्मनिर्भर भई..
लमजुङ्गका जनप्रतिनिधीको निर्णय जग्गा बाँझो राख्न नपाइने
बेँसीसहर। उत्तरी लमजुङमा रहेको मस्याङ्दी गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले गाउँपालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङको अध्यक्षतामा..
लमजुङ । लमजुङका व्यावसायिक अलैँची कृषकले अलैँची सुकाउने आधुनिक भट्टी पाएका छन्। अलैँची व्यवसायी महासङ्घ लमजुङले जिल्लामा रहेका व्यावसायिक अलैँची कृषक समूहलाई २० वटा अलैँची सुकाउने भट्टी उपलब्ध गराएको हो। जिल्लाका..
दोब्बर उत्पादन भएपछि किसान चैते धानखेतीतर्फ आकर्षित
काठमाडौं । बेलडाँडी गाउँपालिका झिलमिलाका किसान बर्खे धानभन्दा दोब्बर उत्पादन दिने चैते धानखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । छोटो अवधिमै बढी प्रतिफल दिने भएपछि यहाँका किसान चैते धानखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।..
असिनाबाट ७० करोड बराबरको गहुँ क्षति
वीरगन्ज। वैशाखको पहिलो साता आएको असिनाबाट बारा जिल्लामा रु ७० करोड मूल्य बराबरको गहुँ बाली क्षति भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका अनुसार सो असिनाबाट जिल्लाको करिब १५ वटा..
मौरीपालनबाट वार्षिक ७ लाख आम्दानी
म्याग्दी । मङ्गला गाउँपालीका–१ कुहुँका गोविन्द केसीले मौरीपालनबाट वार्षिक रु सात लाख आम्दानी गरेका छन् । चार वर्ष साउदी अरब र सात वर्षसम्म इराकमा श्रम गरेका ३९ वर्षीय केसीले चार वर्षअघि..
गोरखा। गोरखाको घ्याल्चोक–५ ज्यामिरेघाटका किसान हरिप्रसाद रेग्मीले बारीमा बन्दा, काउली, फर्सी, काँक्रो लगायतका तरकारी खेती गर्दै आएको वर्षौ भइसक्यो । तरकारी बेचेरै उनले घर खर्च मात्रै होइन बचत पनि गरेका..
कृषि औजारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले आधुनिक कृषि औजार प्रयोग गरी कृषि पेसालाई बढवा दिने कृषकलाई ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने तयारी गरेको छ । आज यहाँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ, फ्युचर एक्स प्रालि..
एउटै बस्तीले अकबरे खुर्सानीबाट २२ लाख कमायो
तेह्रथुम। जिल्लाको सुदाप–२ र ओख्रे–८ स्थित जोडीसल्लाका महिला कृषकले यसवर्ष अकबरे खुर्सानीबाट मात्रै रु २२ लाखभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेका छन्। तीन वर्षयता अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका यहाँका ४०..
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाः स्याङ्जा बन्दैछ सुन्तला जोन
वालिङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ‘जोन’ कार्यान्वयन इकाई अन्तरगत स्याङ्जा जिल्लालाई सुन्तला जोनका रुपमा विकास गरिने भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तरगत यहाँ १० वर्षका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन..
सुन्तला बिक्रीबाट ११ करोड ९७ लाख आम्दानी
ईलाम, । किसानले यस वर्ष एक हजार ९ सय ९५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन गरी रू ११ करोड ९७ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको सुन्तला झापा,..
​सरकारी जागिर छाडेर पुलिस माइला आलुखेतीमा, १२ लाख आम्दानी गर्दै
काभ्रे । बालुवापाटी गाविस– २ का भीमबहादुर घोरसाइने सधैँ आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्छन् । प्रहरीको जागिर छाडेका घोरसाइनेले आलुखेतीबाट वार्षिक १२ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । २१ वर्ष प्रहरी सेवापछि..
​कृषकका लागि बनाइएको बिक्री केन्द्रमा ठूला व्यापारीका जुत्ता, चप्पल र कपडा पसल
खोटाङ । सदरमुकाम दिक्तेलको हाटडाँडा र स–छितापोखरीस्थित पञ्चमीबजारमा निर्माण गरिएको फलफूल तथा तरकारी बिक्री केन्द्रमा जुत्ता, चप्पल र कपडा पसल पनि सञ्चालन गरिएको छ । ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र्‍यापले चार..
सिन्धुली । नागबेली शैलीमा एशियाकै नमूनाका रुपमा निर्माण भएको बिपी राजमार्ग नयाँ प्रविधि र नयाँ शैली प्रयोग भएको छ । बाहिरबाट हेर्न आउने तथा बाटोमा सवारी साधन चलाउने चालक जोसुकै हुन्..
वीरगञ्ज । नेपाल-भारतबीच रहेको खुल्ला सीमाको कारण भारतीय सेतो अन्डा भित्रिनाले बर्डफ्लुको संत्रास कायमै रहेको छ । बारा जिल्लाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भारतको घोडासन, आदापुर, घोडादानालगायतका ठाउँबाट नेपाली नाका मटिअर्वा,..
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कृषि क्षेत्रमा लगानी निराशाजनक रहेको देखिएको छ । आव २०७३÷७४ को पुस मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३८ अर्ब कुल निक्षेप सङ्कलन गरेको..
तितेपातीबाट बन्यो सुगन्धित तेल, रोल्पाको उत्पादन यूरोप-अमेरिकामा पुग्यो
रोल्पा । रोल्पामा उत्पादन तथा प्रशोधन गरी तयार गरिएको सुगन्धित तेल भारत, युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुग्ने गरेको छ। दुई वर्षदेखि जडिबुटी प्रशोधन गरी तेल निकाल्न थालिएको हो। आइडिई नेपाल, जडिबुटी तथा..
भक्तपुर । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तरगतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (आलु जोन)शुरू भएको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बिहीवार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा आलु जोन क्षेत्रको घोषणा गरेका हुन्..
पाल्पा । जिल्लाबाट करिब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ११ लाख ८१ हजार ८३५ किलो तेजपातको पात र बोक्रा भारत निर्यात भएको छ । आव २०७२र७३ मा ९ लाख ९३ हजार..
Results 344: You are at page3of 12